Ny faran’ny herinandro lasa teo no natolotra ny mponina tany an-toerana ireo, dia tranompokonolona iray, CEG iray, efitrano fianarana informatika iray niampy trano fivoahana. Ny lehiben’ny faritra mpisolo toerana, ny ben’ny tanànan’i Bemanonga, natrehan’ny lehiben’ny distrika sy ny olo-manankaja sivily sy miaramila no nitokana ireo asa sosialy ireo ary nanolotra izany ho an’ny vahoaka tao Bemanonga. Hafaliana no nandraisan’ny mponina ireo fotodrafitrasa ireo, hoy ny fanazavana. Marihina fa nijaly tamin’ny tsy fahampian’ny efitrano sekoly ny mpianatra tao amin’ity kaominina ity. Ny 80 isan-jaton’ny asa rehetra dia avy amin’ny mpino silamo sy ireo fikambanana tsy miankina avokoa, izay fantatra fa mpanao asa soa ao amin’io faritra io, raha ny vaovao azo hatrany.